Can nwere ike ịtụ anya na nke a na Walibi Fright Nights - Thrilltalk.com
Home/Okwu ogige/Can nwere ike ịtụ anya na nke a na Walibi Fright Nights
Can nwere ike ịtụ anya na nke a na Walibi Fright Nights
1 27 Ejiri 2 gụọ
Ọ bụrụ na ị Walibi Holland Abalị Na-atụ Egwu mgbe niile na-arụsi ọrụ ike iji gaa mgbe ahụ ma eleghị anya ị kwesịrị ịga na ogige dị ka a VIP afọ a. Afọ a ga- Walibi Holland kwe ka ndị ọbịa pere mpe karịa n'ihi usoro ndị metụtara COVID-19. You chọrọ ịma kpọmkwem ihe ị ga-atụ anya afọ a? Gụzie ma echefukwala ịnye anyị ọnụego soro na Facebook.
Oru ohuru 2020: Nri di nkpa
Afọ a ị nwere ike ịnweta Halloween dị iche na afọ ndị ọzọ. A ga-enwe ụlọ ndị na-ata ahụhụ ole na ole ga-emeghe, mana ụlọ ndị nwere nsogbu nwere ike ije obere ọgbakọ ma ọ bụ naanị ha ga-eleta ha. Ogige ahụ agaghị enwe mpaghara ụjọ dị iche iche nke ndị na-eme ihe nkiri. E mere nke a iji metụta mmụba nke ogige ahụ na iji zere mkpọchi, onye nduzi kwuru Mascha van Til.
Ogige ahụ gaara enwe mmasị ime ememme Halloween na mascot ya n'afọ a Eddie ome ochi ma n’ihi ọ̀tụ̀tụ̀ nke gbara ya gburugburu okpueze virus, ọ dị mwute ikwu, ọ bụ mba dị iche. N'afọ a, Halloween na-eme emume ncheta afọ iri abụọ na ụgụrụ.
Dị ka ọ na-adị, a na-erere ogige ahụ kpamkpam na Halloween, na-akpata nnukwu nnweta. Afọ a ga- Walibi Holland kwere ka ihe ruru mmadụ iri n’ogige ahụ. Nọmalị ikike kachasị nke ogige ahụ karịrị 10.000.
Dabere na onye isi ahụ, ahụmịhe ahụ ga-agbasi ike karịa afọ a ma ọ bụrụ na i jiri nke a tụnyere afọ ndị gara aga. Nke a bụ n'ihi na ịnweghị ike ịga ije na polonaise site na ogige na ezumike ụlọ.
Nleta gị na ụlọ ndị nwere nsogbu ga-abụ "karịa naanị", ka Van Til na-ekwu. Enwere ike na-ekwu maka ọ ga - ekwe omume naanị ileta ụlọ ndị a na - ahụ anya na - agba ọsọ. Ogige ahụ ejideghị nyocha nke afọ a iji weghachite ndị ọhụụ ọhụrụ, mana ọ rịọrọ maka nnweta ndị ọrụ na ndị ọrụ nke afọ ndị na-adịbeghị anya. Agbanyeghị, etinyela ọtụtụ ndị na - eme ihe ụjọ site na afọ gara aga na ndepụta ndozi.
O nwere ike ịbụ na ọtụtụ ndị na-atụ ụjọ na-atụ egwu na afọ ọhụrụ a. Walibi Holland na-aga na Abalị Na-atụ Egwu chee ije ohuru nke ga-agafe oke ohia. Nke a nwere ike ịbụ ụzọ dị ugbu a na ebe a na-ama ụlọikwuu ma ọ bụ na-egbu anụ na ụlọ ihe nkiri ochie.
Walibi Holland na-aga ịhazi ookbọchị Spooky maka ụmụaka n'afọ a. Ọzọ, emeela mgbanwe dị iche iche iji chekwaa mita 1,5.
Ndi Walibi Abalị Na-atụ Egwu na ụbọchị Spooky bụ afọ a Site na October 10 ruo November 1, 2020.
Tiketi na ozi nwere ike ịchọta na: Ebe nrụọrụ weebụ na-atụ egwu abalị.
Eddie ome ochi Abalị Na-atụ Egwu Halloween Mascha van Til Oge Egwu Walibi Holland
Jiri nwayọ nwayọ mee ka ogige ntụrụndụ dajụọ
Pingback: Imeri ndenye aha Walibi Holland na - Thrilltalk.com